ဝဲ - စတြစ်ဂျီဒီး မျိုးရင်း။ Tawny owl (Strix aluco), Eurasian eagle-owl (Bubo bubo), Little owl (Athene noctua), Northern saw-whet owl (Aegolius acadicus);
ယာ - တိုက်တွန်နစ်ဒီး မျိုးရင်း။ Barn owl (Tyto alba), Lesser sooty owl (Tyto multipunctata), Tasmanian masked owl (Tyto novaehollandiae castanops), Sri Lanka bay owl (Phodilus assimilis)။
ဇီးကွက် မျိုးစိတ်များ ကျက်စားရာ ဒေသ
ဇီးကွက်များသည် စတြစ်ဂျီဖောမိစ်-မျိုးစဉ်၌ ပါဝင်သော မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်မှ ငှက်များဖြစ်သည်။ ဇီးကွက်များတွင် ခန္ဓာကိုယ် တည့်မတ်စွာရပ်နိုင်ခြင်း၊ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ဦးခေါင်းရှိခြင်း၊ မှန်ဘီလူးဖြင့် ချဲ့၍မြင်ရသကဲ့သို့သော စူးရှကောင်းမွန်သည့် အမြင်အာရုံရှိခြင်း၊ ဒွိသဘာဝရှိသည့် အကြားအာရုံပါရှိခြင်း၊ ချွန်ထက်သည့် ခြေသည်း (သို့) အတက်များပါသော ခြေချောင်းများရှိခြင်းနှင့် တိတ်ဆိတ်စွာ ပျံသန်းရန် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အမွှေးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် တောင်ပံများပါရှိခြင်း၊ တစ်ကောင်တည်း ထီးတည်းနေလေ့ရှိခြင်း အစရှိသည့် သွင်ပြင်လက္ခဏာများပါရှိသော သားရဲညဉ့်ငှက်များ ဖြစ်သည်။ ညဉ့်ငှက်များဟု ဆိုရာတွင် နေ့အချိန် ကျက်စားသော မြောက်ပိုင်းဒေသမှ သိမ်းဇီးကွက်နှင့် လူသိများသော မြေအောင်းဇီးကွက်တို့မှာ ချွင်းချက်ဖြစ်သည်။
အများအားဖြင့် ဇီးကွက်များသည် နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်များ၊ အင်းဆက်များနှင့် အခြားငှက်များကို အမဲလိုက်လေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် အချို့မျိုးစိတ်များသည် ငါးကိုအမဲလိုက်ရာ၌ အထူးကျွမ်းကျင်ကြသည်။ သူတို့ကို ဝင်ရိုးစွန်းရေခဲဒေသများနှင့် အချို့သော ဝေးလံသည့်ကျွန်းများ မှလွဲလျှင် ကမ္ဘာဒေသအားလုံး၌ တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဇီးကွက်များ၏ မူလဇာစ်မြစ် တူညီစွာ ဆင်းသက်လာမှုနှင့် မျိုးရိုးဗီဇဆက်နွယ်မှုစသည့် သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာတွေ့ရှိထားမှုများအပေါ် မူတည်ကာ စတြစ်ဂျီဒီ-မျိုးရင်း (Strigidae) နှင့် တိုက်တွန်းနစ်ဒီး-မျိုးရင်း (Tytonidae) ဟူ၍ မျိုးရင်း(၂)ခု ခွဲခြားထားသည်။
ဇီးကွက် အစုအဖွဲ့တစ်ခုကို "ပါလီမန် (parliament)" ဟုခေါ်ကြသည်။
၂ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် နည်းစနစ်ကျနမှု
၂.၂ Tytonidae (လင်ကောင်ပိုး မျိုးရင်း)
၂.၃ Strigidae (ဇီးကွက် အမှန်)
၃ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၄)မှ "ဇီးကွက်" အကြောင်း ဆောင်းပါး
ဇီးကွက်များသည် ရှေ့သို့တူရှုနေသည့် ကြီးမားသော မျက်လုံးများနှင့် နားပေါက်များ၊ သိမ်းငှက်ကဲ့သို့ ချွန်သော နှုတ်သီး၊ ပြားချပ်သောမျက်နှာရှိပြီး အများစု၌ မျက်နှာနှင့် မျက်လုံးတဝိုက်သည် ထင်ရှားသော အရောင်အသွေးရှိသည့် အမွှေးအတောင်များဖြင့် စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန် ဖြစ်သည်။ သားရဲငှက်အများစု၏ မျက်လုံးများသည် ဦးခေါင်း၏ ဘေးနှစ်ဖက်တွင်ရှိကြသည်။ သို့သော် ဇီးကွက်၏ ရှေ့မူနေသော မျက်လုံးများသည် အလင်းရောင်အားနည်းချိန်တွင် သားကောင်ရှာဖွေရန် လိုအပ်သည့် နက်ရှိုင်းသော အမြင်အာရုံကို ရရှိစေသည်။ ဇီးကွက်များသည် မြင်ကွင်း ပုံရိပ်ချဲ့နိုင်စွမ်းရှိသည့်အလျောက် ၎င်းတို့၏ ကြီးမားသော မျက်လုံးကြီးများသည် အခြားသော အလားတူ ငှက်များကဲ့သို့ပင် မျက်ခွက်အတွင်း၌ အံဝင်ခွင်ကျ ရှိနေလေသည်။ ထို့ကဲ့သို့ လှုပ်ရှား၍မရသော မျက်စိများကြောင့် မြင်ကွင်းပြောင်းလဲကြည့်ရှုရာ၌ ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံး လှုပ်ရှား လှည့်လည်ရလေသည်။ ဇီးကွက်များသည် အဝေးမြင်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏မျက်လုံးမှ စင်တီမီတာအနည်းငယ်အတွင်း ဘာကိုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရပေ။ ၎င်းတို့ဖမ်းမိသော သားကောင်များကို နှုတ်သီးနှင့် ခြေဖဝါးများပေါ်ရှိ ဆံပင်ကဲ့သို့သော အမွေးများအား “သိမြင်ခံစားနိုင်မှု”အဖြစ် အသုံးပြု၍ သိရှိလေသည်။ ဇီးကွက်၏ အဝေးသို့ မြင်နိုင်စွမ်းသည် အလင်းရောင်နည်းချိန်တွင်သာ အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
မကြာသေးမီက တွေ့ရှိခဲ့ရသော phylogenetic လေ့လာမှုများအရ ဇီးကွက်များသည် သီးခြားမျိုးနွယ် အစုအဖွဲ့ Telluraves အတွင်းသို့ အတိအကျပါဝင်ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းကြောင့် Accuraitrimorphae နှင့် Coraciimorphae တို့နှင့် အနီးကပ်ဆုံး ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်။
အောက်ပါ မျိုးရိုးစဉ်ဇယား ရုပ်ပုံကားချပ်တွင် ကြည့်ပါ-
Cathartiformes (ကမ္ဘာသစ် လင်းတများ)
Accipitriformes (သိမ်းငှက်၊ လင်းယုန် လင်းတ)
Trogoniformes (ထပ်တယူငှက်များနှင့် quetzals)
Passeriformes (စာကလေးနှင့် အလားတူငှက်များ)
Tytonidae (လင်ကောင်ပိုး မျိုးရင်း)[ပြင်ဆင်ရန်]
Strigidae (ဇီးကွက် အမှန်)[ပြင်ဆင်ရန်]
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၄)မှ "ဇီးကွက်" အကြောင်း ဆောင်းပါး[ပြင်ဆင်ရန်]
ဇီးကွက်သည် မျိုးစဉ် 'စတြစ်ဂျီဖောမီး' တွင်၎င်း၊ မျိုးရင်း တိုက်တွန်းနိဒီး' တွင်၎င်း ပါဝင်၏။ ဇီးကွက်အမျိုးပေါင်း ၂၅ဝ ခန့်ရှိသည်။ ဇီးကွက်ကို သမပိုင်း၊ အပူပိုင်းနှင့် အအေးလျှော့ အာတိတ်ဒေသကဲ့သို့သော နေရာများတွင်သာမက၊ ကုန်းပြင်နှင့် အဆက်အသွယ်မရှိသော ပင်လယ်ကျွန်းများတွင်လည်းတွေ့ရ သည်။ ၆ လက်မမျှပင်မရှိသော ဇီးကွက်အငယ်ဆုံးကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အနောက်တောင်ပိုင်းနှင့် မက္ကဆီကိုအနောက်ပိုင်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။ အကြီးဆုံး ဇီးကွက်ကိုမူ ကနေဒါနှင့် အလာစကာကျွန်းဆွယ်ရှိ တောနက်များတွင် တွေ့ရ၏။ ထိုဇီးကွက်သည် အလျား လက်မ ၃ဝ ရှိ၍၊ အတောင်ကို ဖြန့်လိုက်သောအခါတွင် တစ်စွန်းမှ တစ်စွန်းသို့ ၅၄ လက်မမှ လက်မ ၆ဝ ထိရှိသည်။ ဇီးကွက်တွင် ကြီး၍ ကျယ်ပြန့်သော ဦးခေါင်းနှင့် မျက်လုံးပတ်လည်တွင် ဖြာထွက်နေသော အမွှေးများရှိခြင်းကြောင့် ယင်းကိုလွယ်ကူစွာ မှတ်မိနိုင်သည်။ ထိုအမွှေးများသည် နားတွင်လည်းရှိသည်။ ထိုမျက်လုံးများသည် အခြားငှက်များ၏ မျက်လုံးများကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ၊ ရှေ့သို့သာ စိုက်ကြည့်နေတတ်သည်။ ဇီးကွက်၏ မျက်စိသည် လူ၏ မျက်စိကဲ့သို့ မျက်တွင်း၌ မလှုပ်ရှားနိုင်ချေ။ ထိုကြောင့် ရွေ့ရှားနေသည့် အရာတစ်ခုကို ကြည့်လိုသောအခါတွင် ခေါင်းကိုပါရွေ့ပေးရသည်။ ဇီးကွက်မျက်စိ၌ မျက်တောင်ရှည်များရှိသည်။
ဇီးကွက်၏ကိုယ်သည် တို၍တုတ်သည်။ နုတ်သီးကောက်သည်။ ခြေထောက်သန်၏။ ခြေသည်းထက်သည်။ အချို့ဇီးကွက်၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် အမွှေးများစု၍ နေတတ်သည်။ ဇီးကွက်၌ ထူထပ်သော အမွှေးအတောင်များရှိသည်။ ထိုကြောင့် ဇီးကွက်သည် ကိုယ်ကြီးပုံရလေသည်။ ဇီးကွက်သည် မြန်မြန်ပျံသန်းနိုင်သော်လည်း အမွှေးနုများ ထူထပ်စွာရှိသဖြင့် အခြားငှက်များကဲ့သို့ ပျံသန်းသောအခါတွင် အသံမမြည်ချေ။ သားကောင်ကို အသံမကြားစေဘဲ ထိုးသုတ်နိုင်သည်။ များစွာသော ဇီးကွက်မျိုးတို့သည် နေ့အချိန်၌ မြင်နိုင်သော်လည်း အမြင်မသန်ချေ။
The snowy owl is very endangered in Scandinavia
သို့သော် နေ့အချိန်တွင် ကောင်းစွာမြင်နိုင်သော ဇီးကွက်မျိုးလည်းရှိသည်။ ဇီးကွက်၏ လည်ပင်းသည်တို၍ တုတ်၏။ ခြေထောက်များသည် ကိုယ်၏ နောက်ပိုင်းခပ်ကျကျတွင် ရောက်နေသဖြင့် နားနေသည့်အခါ မတ်တတ်ရပ်နေသည်ဟု ထင်ရသည်။
ဇီးကွက်သည် ကိုယ်ဖြတ်သတ္တဝါများ၊ ဖားများ၊ တီများ၊ အင်းဆက်ပိုးများကို စားသည်။ အများအားဖြင့် အစာကို အရှင်လိုက်ဖမ်းလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လတ်ဆတ်သော အသေကောင်များတွေ့လျှင်လည်း ကောက်ယူလေ့ရှိသည်။ အချို့ဇီးကွက်တို့သည် ရေတိမ်၌ရှိသော ငါးများကို ဖမ်းယူတတ်သည်။ ဇီးကွက်သည် သိမ်းငှက်ကဲ့သို့ အစာကိုမစားမီ ကိုက်ဖဲ့လေ့ရှိသည်။ သားကောင်ငယ်ငယ်ကိုသာ တစ်ကောင်လုံး မျိုချတတ်သည်။ ထိုနောက်မှ မကြေနိုင်သည့် အရိုး၊ အကြေးခွံ၊ အမွေးအတောင်များကို ပြန်ထုတ်ပစ်သည်။
ဇီးကွက်သည် အသိုက်လုပ်ရာ၌ မကျွမ်းကျင်ချေ။ အများအားဖြင့် သစ်ခေါင်းများ၌ဖြစ်စေ၊ လိုဏ်ခေါင်းများ၌ဖြစ်စေ၊ မြေအောက်တွင်းများ၌ဖြစ်စေ၊ လူမနေဘဲ စွန့်ပစ်ထားသော အိမ်များ၌ဖြစ်စေ၊ ကျီများ၌ဖြစ်စေ၊ သိမ်းနှင့်ကျီးတို့၏ အသိုက်ဟောင်းများ၌ဖြစ်စေ အသိုက်ကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်းလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဇီးကွက်ဥသည် အဖြူရောင်တွင် အဝါရောင်သော်လည်းကောင်း၊ အပြာရောင်သော်လည်းကောင်း သန်းနေတတ်သည်။ အများအားဖြင့် ၃ ဥ၊ ၄ ဥ အုတတ်သော်လည်း အချို့ဇီးကွက်တို့သည် ၁၂ ဥထိ အုတတ်သည်။ အသိုက်ကို အဖိုနှင့် အမ နှစ်ဦးစလုံးက စောင့်ရှောက်သည်။ ဇီးကွက်ကြီးသည် အသိုက်ကိုလာ၍နှောင့်ယှက်သော ရန်သူများအား ရဲရင့်စွာကာကွယ်သည်။ ဇီးကွက်ကလေးများသည် ထူထဲသော မွေးနုဖြူများရှိ၍ ချစ်စဖွယ်ကောင်းသည်။ ထိုအကောင်ကလေးများသည် အခြားငှက်ငယ်များထက် ပို၍ကြာရှည်စွာ အသိုက်တွင်း၌ နေကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဇီးကွက်သည် ၈ လက်မခန့်ရှိသည်။ ထိုဇီးကွက်မျိုး၏ နားရွက်၌ အမွှေးစုများမရှိချေ။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၌ ဇီးကွက်ကို အတွေ့ရများသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း၊ စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်း၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ပဲခူးမြို့ တို့တွင်လည်း အတွေ့ရများသည်။ ခင်ပုပ် သို့မဟုတ် မြီးဝန်ငှက်၊ တောလုံ၊ တီးတုတ်(ဒီးဒုတ်)၊ ကုပ်ကလူး၊ လင်ကောင်ပိုး(ဝါ) ငှက်ဆိုးတို့သည် ဇီးကွက်မျိုးတွင် ပါဝင်ကြသည်။ 
↑ Lipton၊ James (1991)။ An Exaltation of Larks (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Viking။ ISBN 978-0-670-30044-0။
↑ "Phylogenetic Signal of Indels and the Neoavian Radiation" (2019). Diversity 11 (7): 108. doi:10.3390/d11070108. ISSN 1424-2818.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇီးကွက်&oldid=712398" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။